CL- Group F: Real Madrid oo iska lumisay fursad ay kaalinta koowaad uga soo bixi lahayd guruubkan, kaddib barbaro ay la gashay Borussia Dortmund… + SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 08 Dis 2016 – Kulanka ka tirsan guruubka F ee Champions League ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda kubadda cagta Real Madrid ay iska lumisay fursad ay guruubkan kaga soo bixi lahayd kaalinta koowaad kaddib barbaro ay la gashay Borussia Dortmund oo marti u ahayd.
Karim Benzema ayaa labo gool u dhaliyey kulankan kooxdiisa Real Madrid, laakiin taasi uma gacan galin inay ku dhammaystaan kaalinta labaad oo waxaa barbaro 2-2 ku celisay Borussia Dortmund.
Real Madrid ayaa goolasha la horreysay waxaana labada gool u dhaliyey Karim Benzema, goolka hore ayaa ahaa mid uu dhaliyey 28’daqiiqo kaddib markii uu dhammaystiray kubbad uu soo dhigay Daniel Carvajal kulanka ayaana lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sarreysay Real Madrid.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Real Madrid ayaa la timid goolka labaad waxaana markale u dhaliyey Karim Benzema, kaddib markii uu madax ku dhaliyey kubbad uu 53’daqiiqo dadab ka soo qaaday James Rodriguez, Real Madrid ayaana kulanka ku hoggaamisay 2-0.
Wixii markaas ka dambeeyey Borussia Dortmund ayaa hurdada ka toostay waxaana ay la timid goolka koowaad 61’daqiiqo waxaana u dhaliyey Pierre-Emerick Aubameyang, kaddib caawin uu ka helay Marcel Schmelzer, kaasoo kulanka ka dhigay 2-1 wali looga gacan sarreeyey Dortmund.
Borussia Dortmund ayaa goor dambe la timid goolka barbaraha waxaana u dhaliyey 89’daqiiqo Marco Reus, kaddib markii uu lug ku dhammaystiray kubbad uu soo dhigay dhaliyaha goolka koowaad ee Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, kulanka ayaana ku soo dhammaaday barbaro 2-2.
Natiijadan ayaa ka dhigtay in Borussia Dortmund ay sidaas kaalinta koowaad kaga soo baxdo guruubkan, halka Real Madrid ay ku soo baxday kaalinta labaad.
Dhinaca kale kooxda Legia Warszawa ayaa ku dhammaysatay kaalinta 3-aad ee guruubkan, kaddib markii ay 1-0 ku martay naadiga Sporting CP, waxaana Legia Warszawa goolkaas madiga ah u dhaliyey 30’daqiiqo Guilherme.